ဗီလိန်ရဲ့ အိပ်ရာ: February 2009
မတူတာလေးတွေရှာကြမယ်။ ဘယ်နှချက်ရှိသလဲ။ ????
33 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... ဓာတ်ပုံ
ဒီနေ့ ကျောင်းတွေစဖွင့်တဲ့နေ့။ ဒုတိယတန်းတက်ရမှာ။ ဒါပေမယ့် ကျမအသက်က အခုဆို ၉နှစ်ထဲဝင်နေပြီ။ ဖေကြီးဆုံးကတည်းက ကျောင်းမတက်ရတာ နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီ။ ဖေကြီးဆုံးတော့ မေကြီးလည်း တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာ။ မေကြီးက အကြော်ရောင်းတယ်။ ဖေကြီးဆုံးတဲ့နှစ်က ကျမရော မမကြီးပါ ကျောင်းနားလိုက်တာလေ။ နောက်တစ်နှစ်ရောက်တော့ မေကြီးက ပိုက်ဆံစုပြီး မမကြီးကို ကျောင်းတက်ခိုင်းတယ်။ မမကြီးက ခုဆို လေးတန်းအောင်သွားပြီ။ ဒီနှစ်ကတော့ ကျမအလှည့်ပေါ့။ မမကြီးကျောင်းတက်တုန်းက ကျမက မေကြီးကို ဈေးကူရောင်းပေးတယ်လေ။ မေကြီးက လမ်းထိပ်က လက်ပံပင်အောက်မှာ တဲထိုးပြီးရောင်းတယ်။ ကျမက ဗန်းရွက်ပြီး လိုက်ရောင်းတယ်။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆို မမကြီးလည်း ရောင်းပေးပါတယ်။ မေကြီးက မမကြီးကို ကျောင်းဖွင့်ရက်ဆို မရောင်းခိုင်းဘူး။ စာပဲကျက်ခိုင်းတယ်လေ။ မနှစ်က ကျမကိုယ်တိုင် အကြော်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကို မေကြီးက တဝက်ပဲ ပြန်ယူပြီး တဝက်ကို စုဗူးထဲ ထည့်ပေးထားတယ်။ အဲဒီငွေနဲ့ ဒီနှစ်ကျောင်းတက်လို့ရပြီ။
မမကြီးကျောင်းတက်တုန်းက ထမင်းဗူးကို တစ်ပတ်မှာ သုံး၊ လေးရက်က မေကြီး အကြော်နဲ့ပဲ ယူသွားတယ်။ ညနေကျမှ ဟင်းရွက်လေးဘာလေးနဲ့ ချက်တာပေါ့။ ဒီနေ့ကတော့ ကျမရဲ့ ပထမဆုံးရက်မို့ မေကြီးက ကြက်ဥတစ်လုံး ကြော်ပေးလိုက်တယ်။ ကြက်ဥက စားရခဲတယ်လေ။ ကြက်ဥဈေးကလည်း မသေးဘူးလေ။ ထမင်းရယ်၊ ကြက်ဥရယ်၊ ဗူးသီးကြော်တစ်ခုရယ်။ ပျော်စရာကြီး နေ့လည် ထမင်းစားချိန်ဆင်းတော့မှ အားရပါးရ စားပစ်ဦးမယ်။ ထွက်လာကာနီး မမကြီးကိုတောင် ကြွားခဲ့သေးတယ်။ ကျောင်းရောက်ရင်လည်း သူငယ်ချင်းအသစ်ရှာပြီး ကြွားဦးမယ်။ ကျောင်းဝတ်စုံက မနှစ်က မမကြီးဝတ်တဲ့ ဝတ်စုံမို့ နည်းနည်းတော့ ပွနေတယ်။ စကပ်ကလည်း ချိတ်မရှိတော့လို့ တွယ်ချိတ်နဲ့ ချိတ်ထားရတာ။ မေကြီးက ဒီတစ်ပတ်ကျောင်းပိတ်မှ ပြန်တပ်ပေးမယ်တဲ့။ ထမင်းဗူးကလည်း မနှစ်က မမကြီး ကိုင်တဲ့ ထမင်းဗူးပဲ။ မနှစ်ကကျောင်းတက်တုန်း မမကြီးက အကြော်ကြော်တဲ့ ဆီပူဇွန်းကို ထမင်းဗူးပေါ်တင်လိုက်လို့ ဆီပူလောက်ကွက်လေး ရှိတာကလွဲရင် အကောင်းကြီးရှိသေးတဲ့ ပလတ်စတစ်ဗူးပါ။ လွယ်အိတ်ကတော့ အသစ်လေ။ မနှစ်က ဈေးရောင်းပြီးစုထားတဲ့ ငွေထဲက ဝယ်ထားတာပေါ့။ ကျောင်းလာတဲ့လမ်းတလျှောက် ပျော်လွန်းလို့ လမ်းပေါ်က ကျောက်ခဲလေးတွေတောင် လျှောက်ကန်ပစ်ခဲ့သေးတယ်။
လမ်းမှာလည်း အဖြူအစိမ်းနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အများကြီးပဲ။ တချို့ကလည်းပျော်နေကြတယ်။ တချို့ကလည်း ငိုနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အပျော်က ကျမကိုမီမယ်မထင်။ သူတို့ကတော့ စက်ဘီးတတန်၊ ဆိုင်ကယ်တဖုံ၊ ကားတစ်မျိုးပေါ့။ ကျမကတော့ လမ်းလျှောက်လာရတာ။ အိမ်ကနေဆို နာရီဝက်နီးပါးလောက်တော့ လျှောက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြော်ရောင်းတုန်းကဆို တစ်မနက်လုံး၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ညနေလုံးလျှောက်ခဲ့ရတာ။ ဒီလောက်တော့ အသာလေးပါ။ မေကြီးကလည်း လိုက်မပို့နိုင်ဘူးလေ။ ဒီအချိန်ဆို ဆိုင်မှာ အကြော်ကြော်လို့ ကောင်းနေပြီ။ လက်ထဲက ထမင်းဗူးကို ကြည့်ပြီး မေကြီးဒီနေ့လည်း ဈေးရောင်းကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းမိသေးတယ်။ ငါးပိရေမပါလာတာ နာသကွာ။ မနက်ကအချိန်မရလို့ မေကြီးက ငါးပိရေကြိုမပေးလိုက်ဘူးလေ။ ဟုတ်ပြီ။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်ကျရင် ကြက်ဥကြော်ကို တဝက်ချန်ထားမယ်။ ညနေအိမ်ပြန်ရောက်မှ ငါးပိရေနဲ့ ထပ်စားမယ်။ ဟိဟိ ပျော်လိုက်တာ။ အတွေးတွေနဲ့ လျှောက်လာလိုက်တာ ဟိုရှေ့မှာ နိုင်ငံတော်အလံနဲ့ ဘေးက အရောင်လေးမျိုးနဲ့ အလံလေးတွေတောင် တွေ့နေရပြီ။ အဲ... အခုမှ သတိထားမိတယ်။ မိုးတောင် အုံ့နေပြီ။ ရွာမလားမသိဘူး။ ထီးလည်းပါမလာဘူး။ ပြေးဦးမှ။
မောမောပန်းပန်းနဲ့ ကျောင်းရောက်ပြီး ခဏနေတော့ မိုးကစရွာတယ်။ ကွင်းပြင်ထဲမှာ ကစားနေကြတဲ့ အဖြူအစိမ်းလေးတွေအကုန် ကျောင်းဆောင်ပေါ် ရောက်လာကြပြီ။ ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံး ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတာပဲ။ စကြနောက်ကြနဲ့ပေါ့။ စာသင်နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ် ဆရာ၊ဆရာမသစ်နဲ့ပေါ့။ တော်တော်များများကလည်း အင်္ကျီအသစ်၊ ဘောင်းဘီစကပ်အသစ်၊ လွယ်အိတ် အသစ်လေးတွေနဲ့။ ကျမကတော့ လွယ်အိတ်ပဲသစ်တာ။ ဒါပေမယ့် မရှက်ပါဘူး။ မေကြီး မဝယ်ပေးချင်လို့မှ မဟုတ်တာ။ မေကြီးကလည်း ပိုက်ဆံစုပြီး ဝယ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးထားပြီးသား။ ခဏနေတော့ ကျောင်းခေါင်းလောင်းကခေါက်ပြီ။ နေရာလုတဲ့လူက လုနေကြဆဲ။ ကျမကတော့ အသက်ကလည်း သူတို့ထက်စာရင် နှစ်နှစ်လောက်ကြီးတယ်။ လူကလည်း သူတို့ထက်စာရင် ကြီးနေပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံးတန်းမှာပဲ ထိုင်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူမှလည်း လာလုမယ့်သူမရှိဘူး။ တံခါးပေါက်နဲ့လည်းနီးတယ်လေ။ တံခါးပေါက်က ရှေ့မှာတစ်ပေါက် နောက်မှာတစ်ပေါက်ဆိုတော့ ကျမက နောက်တံခါးပေါက် ဘေးနားလေးတင်ဖြစ်နေတာပေါ့။
ဆရာမဝင်လာတော့ ဆရာမကပြောတယ်။ အတန်းရဲ့နောက်ဆုံးက ပိုနေတဲ့ စားပွဲခုံတွေပေါ်မှာ ထမင်းဗူးတွေအားလုံး တင်ထားဖို့ပြောပါတယ်။ ပိုနေတဲ့ စားပွဲခုံတွေဆိုတာ ကျမထက် နောက်ရောက်ပါတယ်။ စာသင်ခန်းရဲ့ နံရံနဲ့ ကပ်ပြီးစီထားတဲ့ စားပွဲခုံပိုတွေပါ။ ထိုင်ခုံမရှိပါဘူး။ အဲဒီ့စားပွဲခုံတွေနဲ့ ကျမနဲ့ ကြားထဲမှာ လူသွားလမ်းရှိပါတယ်။ နောက်ပေါက်ကနေ အပြင်ထွက်မယ့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် နည်းနည်းချဲ့ပေးထားတာပါ။ ဒါနဲ့ အဲသည်အပေါ်ကို ထမင်းဗူးတွေအားလုံး လာတင်ပါတယ်။ ကျမလည်း သွားတင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကမချဘူး။ ဆရာမစကားပြောတုန်း နောက်ကို ခဏခဏ လှည့်ကြည့်ရတာအမော။ ဆရာမက သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက် နိဒါန်းစကားတွေ ဘာတွေပြောလိုက်တာတောင် ထမင်းဗူးပေါ်စိတ်ရောက်နေတော့ ဆရာမနာမည်တောင် မကြားမိလိုက်ဘူး။ ဘေးက တစ်ယောက်ကို ပြန်မေးရတယ်။ အော်... ကြက်ဥကြော်အစွမ်းက တယ်လည်းထက်သကိုး။ အတွေးထဲမှာ နေ့လည်စာတင်မကဘူး။ ညနေငါးပိရည်နဲ့ စားရမယ့် ကြက်ဥကြော်ကိုပါ မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်နေတာ။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာမက နေရာတွေချပေး၊ အသင်းတွေ ခွဲပေးရင်းနဲ့ပဲ နေ့လည် ထမင်းစားချိန် ခေါင်းလောင်းထိုးပါတော့တယ်။
ရောက်လာပါပြီ။ ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ ဆရာမကို စိတ်မရောက်ပဲ ထမင်းဗူးပေါ် စိတ်ရောက်နေတာကို မေကြီးကိုပြန်ပြောရင် ရယ်ပဲရယ်မလား။ ဆူပဲဆူမလားတော့ မပြောတတ်။ သေချာသည်က ထမင်းဗူးပေါ်မှာပဲ စိတ်ကရောက်နေတာတော့ ငြင်း၍မရ။ ဟိုဘက် ယောက်ျားလေးဘက်ခြမ်း နောက်ဆုံးတန်းက ကောင်လေးတွေကတော့ ဆရာမထွက်သွားတာနဲ့ အချင်းချင်း နောက်ကြပြောင်ကြ ထိုးလားကြိတ်လားနဲ့။ သူတို့ကြည့်ရတာ ပျော်တော့ ပျော်စရာကြီး။ ဒါနဲ့ပဲ ကျမလည်း ထမင်းဗူးထယူပြီး ကျမ စားပွဲကိုပြန်အလာ စောစောက နောက်နေကြတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က အပြင်ကိုပြေးအထွက် (သူကလည်း ကျမကိုမမြင် ကျမကလည်း ထမင်းဗူးကိုပဲ ကြည့်နေတာလေ။) ကျမကိုဝင်တိုက်ပြီး ကျမလက်ထဲက ထမင်းဗူးက လွတ်ကျသွားပါတယ်။ ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး ထမင်းစေ့တွေ ပြန့်ကျဲလို့။ ကြက်ဥကြော်ကလည်း အရှိန်နဲ့ အပြင်အထိ ရောက်သွားပြီး လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေထောက်အောက်ကို ရောက်ပြီး ကောင်မလေးတောင် ချော်လဲမတတ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျမလည်း တွေပြီးကြည့်နေမိတယ်။ မျက်လုံးက ကြက်ဥကြော်ဆီကမခွာ။ မျက်လုံးအိမ်ထဲက မျက်ရည်တွေကလည်း ဝဲပြီး ပါးပေါ်ကိုစီးကျလာပြီ။ သူဝင်တိုက်လိုက်တုန်းက ဟထားခဲ့တဲ့ ကျမပါးစပ်လည်း ပြန်မပိတ်တော့ တစ်ကိုယ်လုံး ရပ်တန့်သွားတယ်။ ဘာဆိုဘာမှ မသိတော့ဘူး။ နောက်ဆုံး တဆက်ဆက်တုန်ပြီး လဲကျသွားလိုက်တာ ဆရာမတွေနားနေခန်းထဲမှာ အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျမနာမည်ကို ခေါ်တဲ့အထိပဲလေ။
21 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... ဘဝတချို့, ဝတ္ထုတို
ကစတန်မာ ကွန်ပလိန်းသံက ကြာ
ချစ်သူဆီက အဖြေက ကြာ
ကြာ အားလုံးက ကြာ
*မုန့်ဟင်းခါး = အဆူခံထိခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
Oscar Winner Wall-E
၂၀၀၈ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Animation ဆုကို Wall-E က ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းသာမိပါကြောင်း စက်ရုပ်ကလေးရေ့။
3 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... မျှဝေခြင်း, ရုပ်ရှင်
ဓမ္မသဘင် (ဆရာတော် အရှင် ဇဝန - မေတ္တာရှင်) ၂၈-၀၂-၀၉ နှင့် ၀၁-၀၃-၀၉
အားလုံးသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့ ခင်မျာ။ လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့၊ တပေါင်းလဆန်း ၆ ရက်၊ စင်ကာပူစံတော်ချိန် ညနေ ၇နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင် မဟာမုနိ ကလက်မန်းတီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (Mahamuni Biddhist Society - Clementi Temple)တွင် လည်းကောင်း၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ တပေါင်းလဆန်း ၇ ရက်၊ စင်ကာပူစံတော်ချိန် ညနေ ၄နာရီမှ ၆နာရီ အချိန်တွင် ကျနော်များ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ယူးနို့ (Eunos) မြို့နယ်၊ အစိမ်းလမ်း ယူးနို့ဘူတာရုံ Eunos MRT(EW7) အနီးရှိ ဂျလန်ယူနို့လမ်းမကြီး(Jln Eunos) နှင့် ဆင်းမ်အဗဲတ်နယူး လမ်းမကြီး(Sims Avenue) လမ်းဆုံတွင် တည်ရှိသော မင်္ဂလဝိဟာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (Mangala Vihara Buddhist Temple) တွင် လည်းကောင်း၊ ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်) မှ တရားရေ အမြိုက်ဆေး တိုက်ကျွေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဓမ္မသဘင် တက်ရောက်၍ ဓမ္မကုသိုလ် ယူနိုင်ကြစေရန် အသိပေးနှိုးဆော် လိုက်ပါသည် ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့ ခင်များ။
မဟာမုနိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ လိပ်စာကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကလက်မန်းတီး ဘူတာရုံ (Clementi MRT - EW23) မှ လိုင်းကားအမှတ် ၇၈ စီးပြီး ၃ မှတ်တိုင်ဆို ရောက်ပါတယ်။
Mahamuni Buddhist Society, 23A,25A Jalan Mas Puteh, Singapore (128628) Ph:67777018
မင်္ဂလဝိဟာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ လိပ်စာကတော့
30 Jalan Eunos, Mangala Vihara Buddhist Temple, Singapore (419495)
ဆရာတော်၏ ပုံကို ကလစ်လုပ်၍ ဆရာတော်၏ Websiteများကို သွားရောက်လေ့လာ ပူဇော်နိုင်ကြပါသည်။ ဆရာတော်၏ Website နှစ်ခုဖြစ်နေပါ၍ နှစ်ခုစလုံးကို သွားရောက်ပူဇော်နိုင်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဆရာတော်၏ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို သက်ဆိုင်ရာ Website များမှ ကူးယူပူဇော်ပါသည်။
6 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... မျှဝေခြင်း, သာသနာ
စပယ်ယာ၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရပ်ဝန်း (၁)
ညနေ နေဝင်ရီတရော အကျည်းတန်လှချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ လူတွေကျိတ်ကျိတ်တိုး လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် လှိုင်သာယာ ပင်လုံဈေး မော်တော်ယာဉ် လိုင်းပေါင်းစုံဂိတ်ရင်းသို့ ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ရောက်ရောက်ခြင်း ကားဆရာဖိုးချမ်း၏ စကားကြောင့် အာမေဋိတ်သံနှင့် အတူ မျက်လုံး နှစ်ဘက်ပါပြူးသွားသည်။
“ဟုတ်တယ်ဆရာ ခုနလေးတင်ပဲ မီးခွက်ဈေးက ကောင်တွေနဲ့။ နားတိုကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဟိုဘက်ကကောင်တွေတော့ အတော်လေးကွဲသွားတယ်။ ဒီညတော့ ဒီကောင် အချုပ်ထဲပဲ နှပ်ရမပေါ့။”
နားတိုဆိုသည်က လှိုင်သာယာတကြောတွင် နာမည်ကြီး ထက်မြက်လှသည့် ကျွန်ုပ်၏ စပယ်ယာပင်တည်း။
“ကဲ ဒါဆိုလည်း မောင်ညို့သွားခေါ်ကွာ။”
မောင်ညိုကတော့ အလွတ်တမ်း ဂျိုကာ စပယ်ယာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်ကား မူပိုင်လိုက်သည့် ကားမရှိ။ စပယ်ယာတွေ မလိုက်နိုင်လျှင် အစားလိုက်ပေးသည့် ဂျိုကာ စပယ်ယာတစ်ဦးပင်။
“ကျနော်သွားပြီးပြီ ဆရာ။ ဒီကောင် မောင်ကီးဆိုင်မှာ မှောက်နေပြီ။”
“အာ... ဒီကောင်တွေတော့ ဒုက္ခပါပဲကွာ။ အလုပ်လုပ်ဖို့ စိတ်မကူးဘူး။ မိုးတောင်ချုပ်မယ် မကြံသေးဘူး မှောက်နေပြီ။ ကဲဒါဆိုလည်း ဟိုဘက်ဂိတ်ကိုသွား ကိုဝင်းဖေ ကြီးသွားခေါ်ချေ။”
“ဟာ ဆရာကလည်း။ သူလည်း ၃လုံးပေါက်လို့ ဘုရားဖူးထွက်သွားတယ်လေ။ သဘက်ခါမှ ပြန်ရောက်မှာ။”
“အေး။ ဒါဆိုဘာလဲ ဒီညက ကားမထွက်တော့ဘူးလား။ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့မှာလား။ သောက်သုံးမကျလိုက်တဲ့ကောင်တွေ။ ခွီးထဲမှပဲ။ ကြာပါတယ်။ ငါပဲလိုက်တော့မယ်။ ဂတ်ကောဖြည့်ပြီးပြီလား။”
“နှစ်ကြောင်းစာပဲ ရှိတော့တယ်ဆရာ။ ညနေက ဂတ်ဆိုင်ကြည့်တော့ အလှူအိမ်ဖြစ်နေလို့ မဝင်ခဲ့ဘူး။”
“အေး ကောင်းကွာ။ ဒါဆိုလည်း ထွက်မယ်။ မင်းစားပြီးပြီလား။”
“ညနေကတော့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အလုံးတိုက်ရင်း ထမင်းကြော်စားထားတယ် ဆရာ။”
“အေး ဒါဆို ချကွာ။”
ဖိုးချမ်းကလည်း ခါးမှ ကားသော့ကိုဖြုတ်ကာ ခေါင်းခန်းဝင်ပြီး သော့ပေါက်၌ ထိုးလိုက်သည်။ နောက်ခန်းမီးဖွင့်ပြီး သူကစအော်သည်
“ကဲလာ။ ဈေးကို ဈေးကို စက်မှုဇုံ တစ်ထိပ်ကသွားမှာ။”
ကျွန်ုပ်လည်း ဖိုးချမ်းနောက်မှ ဆက်အော်လိုက်သည်။
“ကဲလာ ကဲလာ ခုသွားမှာ ခုသွားမှာ။ ဈေးဝို ဈေးဝို”
ဈေးကို ဟုပြောသည်ကို အသံကျယ်နှင့် အားမစိုက်ရအောင် ဈေးဝိုဟု အော်ရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဂိတ်ဘေးတွင် ထွက်မည့်ကားကို ရပ်စောင့်နေသည့် ခရီးသည် ၅ ဦးတက်လာပြီး ဖိုးချမ်းက လီဗာကိုတော့၍ ကားကို လှုပ်ပေးလေသည်။
“ခုသွားမှာ ခုသွားမှာ။ ဈေးဝို ဈေးဝို။”
မကြာမီ ၁၀ ဦးကျော်သွားလေ၏။ ဖိုးချမ်းကလည်း ကားကိုတော့ဆဲ။ သိပ်မကြာလိုက် အထဲမှ ဝဝတုတ်တုတ်နှင့် ဗန်းများထပ်၍ ကိုင်ထားသော မိန်းမကြီးက
“ကဲ စပယ်ယာ ထွက်မှာလား မထွက်ဘူးလား။ မထွက်ရင်လည်း ကားကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပါဟာ။ ခေါင်းမူးလို့ပါ။”
ကျွန်ုပ်ကလည်း စပယ်ယာ လေသံအပြည့်ဖြင့် စိတ်မရှည်သည့် ပုံစံဖြင့်
“ထွက်မှာ ထွက်မှာ။ ကျုပ်က ပိုတောင်ထွက်ချင်သေးတယ်။ စက်မှုဇုံ တစ်ထိပ်ကသွားမှာ ဈေးဝို ဈေးဝို”
နောက်တစ်ကြိမ်အော်လိုက်သည်။ လူတွေကလည်း လူတွေပဲ ကားလှုပ်မှ ကားပေါ် တက်ချင်ကြသည် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ဖိုးချမ်းက ကားကို လှုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အင်တာကွန်းမှ ဖိုးချမ်း၏ အသံက ထွက်လာသည်။
“ဆရာ ရွှေ့ရအောင် ရုံလွှတ်တော့မယ်။”
“အေး သွားမယ်။ ဈေးဝို။ ဈေးဝို။”
ကားထွက်သည့်တိုင် တိုင်ကိုတွယ်၍ အော်နေလိုက်သည်။ ဟိုး လမ်းကြားထဲမှ လက်ပြနေသည့် လူတစ်ယောက်တွေ့၍
ကျွန်ုပ်၏အော်သံကြောင့် ဘရိတ်ဆောင့်အလုပ်လိုက်သောကြောင့် အော်သံများထွက်လာသည်။
မသိချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ပြီး စောစောက လူကို လက်လှမ်းပေးလိုက်သည်။
ဤသို့ဖြင့် ခရီးကစလေပြီ။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ရုပ်ရှင်ရုံရှေ့တွင် ရှေ့ကကောင်က မထွက်သေး။ ဖိုးချမ်းကလည်
“မင်းတို့ကသွားတော့လေကွာ။ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ မင်းတို့ထွက်သွားတာ။”
ဟုပြောသည့်တိုင် ပေကပ်ကပ်က လုပ်နေသေးသည်။ ပြောရင်းနှင့် ရုံကလွှတ်ပါပြီ။ ဖိုးချမ်းက ရှေ့ကား၏ ခြေနင်းခုံနှင့် ကားခေါင်း ကပ်နေအောင် ရွှေ့လိုက်ပြီး ကျွန်ုပ်ကလည်း အလုအယက်လူခေါ်ပြီး တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆွဲတင်လိုက်သည်။ ရှေ့ကား၏ ခြေနင်းခုံနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကား၏ ကားခေါင်းက ကပ်နေ၍ တော်ရုံလူက ရှေ့ကားကို မတက်ကြပဲ ကျွန်ုပ်၏ကားပေါ်သို့သာ တက်လေတော့သည်။
ရှေ့ကောင်ကလည်း ရုန်းကာ ခွာသည်။ ဖိုးချမ်းကလည်း လိုက်ကပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကလည်း ရသမျှတင်သည်။ အဝတွင် ပြည့်သိပ်သွားသော်လည်း နောက်ခန်းရှေ့ပိုင်းတွင်က ချောင်နေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ဟိုလှိမ့်သည်လှိမ့်နှင့် တိုးဝင်သွားပြီး ကားခတောင်းရင်း ဈေးထိသွားမည့်သူများကို မေးကာရှေ့သို့ ဆွဲခေါ်ရသည်။ ဒါတောင် ပေကပ်ကပ်လုပ်နေကြသည်မို့ သိပ်အဆင်မပြေလှ။ ကျွန်ုပ်လည်း ပြန်ထွက်လာပြီး
“ကဲ ဖိုးချမ်းရေ့ထွက်ကွာ။ ပြီးရင် တစ်ချက်လောက်။ အားလုံးပဲ သေချာကိုင်ထားကြနော်။”
စကားဆုံးဆုံးချင်းမှာပင် ဖိုးချမ်းက ဘရိတ်ဖမ်းအုပ်လိုက်သည်။ ဆူညံသံတွေ ပွက်လောရိုက်ပြန်ပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း အားလုံးကို လျစ်လျူရှုကာ အေးမြသည့် လေညှင်းကို ခံယူရင်း လင်းတစ်တိုင် မှောင်တစ်တိုင်ဖြစ်နေသည့် လမ်းမီးတိုင်များကိုငေး၍ နေလိုက်သည်။
သည်လိုနှင့် တက်လိုက်ဆင်းလိုက် တင်လိုက်ချလိုက် ဟန်ချက်ညီညီ ဖြစ်နေကာမှ မီးခွက်ဈေးကျော်တော့ မီးခွက်ဈေးက တက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် ၂၀၀ တန်ထုတ်ပေးသည်။ ဘယ်သွားမှာလဲမေးတော့ ဈေးတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ပြန်မအမ်းတော့ပဲ နေလိုက်တာ ၃ထိပ်ရောက်တော့ ကျနော် မှတ်တိုင်အော်လိုက်သည်။
“စပယ်ယာ ၁၀၀ မအမ်းသေးဘူးလား”
“ဘယ်သွားမှာလဲ အစ်ကို။ ဈေးကို တစ်ယောက် ၂၀၀ ပါ။”
“ဟာ.. ၁၀၀ ပါ ကွာ။ မင်းတို့ကလည်း လောဘမကြီးစမ်းပါနဲ့။”
အသံကခပ်မာမာဖြင့် ကျွန်ုပ်အား အလွတ်ကြီး ဟောက်လေတော့သည်။ အဲ... သူကလည်း တမျိုးပါလား။
“၂၀၀ ဗျ ၂၀၀ ကြားကားလေဗျာ။ လိုင်းကားမှ မဟုတ်တာ။”
“ခါတိုင်းစီးနေကြ ၁၀၀ ပါ။ မင်းတို့ဟာကလည်း”
“ဟောဗျာ။ နေ့တိုင်းကောက်နေတာလည်း ၂၀၀ ပါပဲ။ အားလုံးကိုမေးကြည့်ပါ။ ဒီအထဲက သူတွေအားလုံး အမြဲစီးနေတာဗျာ။”
အဲသည်တော့မှ နည်းနည်း ငြိမ်သွားသည်။ ခဏနေတော့ မောက်မာနေသည့် မျက်နှာမှ သနားစဖွယ် မျက်နှာသို့ ပြောင်းသွားပြီး
“ဒါဆိုလည်းကွာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၁၀၀ တော့ ပြန်အမ်းကွာ။ ငါသာကေတကို ဆက်စီးရဦးမှာ။”
“ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့။ အဲလိုပြောပါဗျာ။ အဲလိုပြောရင်ပေးမှာပေါ့။ ၁ထိပ်ပါသေးလားဗျိုး။”
ကျွန်ုပ်လည်း ၁၀၀ ပေးလိုက်ပြီး မှတ်တိုင်အော်လိုက်သည်။ အဲသည်တော့မှာ မိန်းမတစ်ယောက်က
“ဟဲ့ ၁ ထိပ်ရောက်နေပြီလား ၃ ထိပ်မှာ ဆင်းမလို့။”
“ဟာဗျာ စောစောကတော့ မပြောဘူး။ ၁ ထိပ်ကျမှ ပဲဆင်းတော့”
အမှန်တော့ ၃ ထိပ်ကို ကျော်ရုံပဲရှိသေးသည်။ ကား၏ အရှိန်ကြောင့် ကျွန်ုပ်လည်း မရပ်ခိုင်းတော့ပဲ ဆက်မောင်းခိုင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
“ဒါဆို ၁၀၀ ပြန်ပေး ငါ ဟိုဘက်ကို ပြန်စီးရမှာ”
“ဟဲ့ နင်တို့ပြဿနာ ဖြစ်တာ ကြည့်နေတာလေ။ ပြန်ပေး ၁၀၀”
“အာဗျာ။ ဘာကိစ္စလည်းဗျာ။ ကျနော်မအော်ဒါမှ မဟုတ်တာ။ ၁ထိပ်ပါတယ်ဟေ့။”
သည်လိုနဲ့ပဲ ပွစိပွစိလုပ်ပြီး ဆင်းသွားပါလေရဲ့။ တခြား ထူးထူးခြားခြားမရှိပဲ သီရိမင်္ဂလာဈေးကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ည ၈နာရီ ဝန်းကျင်လောက်မို့ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်။ ကုန်ကား၊ လိုင်းကားများနဲ့ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားနေလေသည်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်ဖို့ တန်းစီစောင့်ရင်း ဘေးက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်က ပေါရွှတ်ရွှတ် ရေနွေးကြမ်းကို သောက်ရင်း ဟိုကြည့်သည်ကြည့်ပေါ့။ အလှည့်ရောက်တော့ ကားပြန်ထွက်ဖို့ ကားပေါ်အတက် ခြေနင်းခုံက သံငုတ်သေးသေးလေးနဲ့ ပုဆိုးနဲ့ ငြိပြီး ပုဆိုးက ဟက်တက်ကွဲပါလေရော။ တော်သေးတာပေါ့ ပေါင်ရင်းထိပဲကွဲလို့။ ဖိုးချမ်းကလည်း ခေါင်းခန်းက သူ့ ပုဆိုးစုတ်ကို ထုတ်ပေးတော့ ဝတ်လိုက်တာ ခုမှ ပဲ စပယ်ယာနဲ့ ပိုတူသွားတော့တယ်။
လူခေါ်ရင်းနဲ့ပဲ ခရမ်းချဉ်သီးခြင်း တင်မယ်ဆိုလို့ ကူတင်ပေးရသေးတယ်။ ဆွဲမလိုက်တာ ကားပေါ်ရောက်ကာနီးကျမှ ခြင်းက ပြုတ်ထွက်သွားပြီး ခရမ်းချဉ်သီးတွေ လမ်းမပေါ် ပြန့်ကျဲ ကုန်ပါတယ်။ အဲ.. အဲဒါမှ ဒုက္ခ။ ဝိုင်းကောက်ပေးရင်း ဘေးက အသက်ကြီးကြီး ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်နဲ့ လူတစ်ယောက်က လာမေးပါတယ်။
“ဟုတ်တယ်ဗျ။ တက်တက် ခုထွက်မှာ”
“ဗျာ။ လှိုင်သာယာဆိုဗျ။ ပေါက်တောဝမရောက်ဘူး စက်မှုဇုံကသွားမှာ။”
“မောင်ရင် လူလည်မကျနဲ့ ပေါက်တောဝကားက လှိုင်သာယာရောက်တယ်။ ပေါက်တောဝကနေမှ လှိုင်သာယာက ဆက်သွားရတာ။ ဒီလောက်တော့ သိပါတယ်ကွ။ တောသားဆိုပေမယ့် ဒီလောက်တော့ သိပါတယ်။”
လာပြန်ပြီ နောက်တစ်မျိုး။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ပေါက်တောဝကားတိုင်းကလည်း လှိုင်သာယာမရောက်။
“ပေါက်တောဝကားက လှိုင်သာယာရောက်တာလေ။ လှိုင်သာယာကားက ပေါက်တောဝရောက်တာမှ မဟုတ်တာ။”
ဒီတော့ သူက ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ပြောပါတယ်။ ရွာမှာ ရွာသူကြီးလားတော့ မသိ။
“မင်းတို့ စပယ်ယာတွေက ကားသမားအချင်းချင်း ပေါင်းစားမယ် မကြံနဲ့။ ငါတို့ကို လှိုင်သာယာအထိခေါ်သွားပြီးမှ ပေါက်တောဝကားကို ပြန်စီးခိုင်မလို့မလား။ ငါတိုင်လိုက်ရမလား။ ပေါက်တောဝရောက်ရင်ပြော။ ဒါပဲ။”
အမလေးဗျာ။ ခရမ်းချဉ်သီးက ကောက်လို့မပြီးသေးဘူး ပြဿနာကလာရှာနေတယ်။ ကျွန်ုပ်လည်း အဆင်ပြေမယ့် နည်းလမ်းစဉ်းစား ရပါတော့တယ်။
“ဒါဆို နဂိုက ပေါက်တောဝကို ဘယ်လောက်ပေးရလဲဗျ။”
“ဟုတ်ပြီဗျာ။ ဒါဆို ရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်။”
လိုက်ပို့ပေးမလို့တော့မဟုတ်။ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံထိခေါ်သွားပြီး ကားပြောင်းပေးမလို့ဖြစ်သည်။ ဒါကို မသိတော့ ခရီးသည်တစ်ယောက်ကလည်း။
“ဟေ့ စပယ်ယာ။ တို့က စက်မှုဇုံထဲသွားမှာနော်။”
“ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ အားလုံးကို အရောက်ပို့ပေးပါမယ်။” ဒါတောင် သူက မကျေနပ်သေး အရစ်ကရှည်သေးသည်။
“ဘယ်သူ့ကို အရင်ပို့မှာလဲ။ ကျုပ်တို့ကို အရင်ပို့ပေး။”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ ပို့ပေးပါမယ်။” ထိုအခါ ဟိုရွာသူကြီး (တင်စား၍ ပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။ ရွာသူကြီး ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကျွန်ုပ်လည်းမသိ) ကလည်း
“မောင်ရင် မင်းရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်တော့ မလုပ်နဲ့နော်။ ဒီမှာတွေ့လား” ဆိုပြီး လက်ထဲမှ တုတ်ကောက်ကို ထောင်ပြပါသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ အားလုံး အဆင်ပြေစေရပါမယ်။”
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံရောက်တော့ ပေါက်တောဝကားတစ်စီးကို ၁၀၀ ပေးပြီး ရွာသူကြီးကို တင်ပေးလိုက်တော့မှ ကိစ္စက ပြတ်သွားပါတော့တယ်။
ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံမှာ စက်သတ်ပြီး လူခေါ်တော့ ဖက်ကြမ်းလေးဖွာမလားလို့ အင်္ကျီအိတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ သူက ကျိုးကြေနေပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ ဖိုးချမ်းက လန်ဒန်တစ်လိပ် ထုတ်ပေးတာနဲ့ ဖွာလိုက်တယ်။ လမ်းဆုံထိပ်က မီးတိုင်အောက်မှာ ဒီညခရီးစဉ်ကို ပြန်တွေးပြီး ပြုံးမိသေးတယ်။ အော်... စပယ်ယာ စပယ်ယာ။
စပယ်ယာ၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရပ်ဝန်း (၂) ကို ဆက်လက်အားပေးပါ။
11 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... TAG, အတွေ့အကြုံ
နောက်ဆုတ်လို့ မရတဲ့ အချိန် = ပွန် (Pawn)
အားရပါးရ ရွေ့လျားလို့ရတဲ့ လွတ်လပ်မှု = မြို့တံတိုင်း (Rook)
ဟိုခုန်ဒီကူးနဲ့ ပျော်ရွှင်ခုံမင်ဖွယ် ကောင်းလှတဲ့ သူငယ်ချင်း = မြင်းစစ်သူကြီး (Knight)
ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ခြံရံပြီး အမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးနေတဲ့ မိသားစု = ဘစ်ရှော့ (Bishop)
10 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... ဟိုတွေးဒီတွေး, အတိုအထွာ
အား..... ချာလီ။ Charlie Bit Me!!!
3 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... မျှဝေခြင်း, ဟာသ
အချစ်ဟာ ပိုကာဝိုင်းထဲက ဂျိုကာဖဲနဲ့တူတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ပိုကာဝိုင်းထဲမှာ ဂျိုကာဖဲတွေရှိပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေရှိသလို အချစ်တွေ တွေကိုင်ပြီး ဘဝထဲမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ လည်း တပုံတပင်ပဲလေ။ ကိုယ့်မှာသာ လိုအပ်တာတွေ ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့ အချစ်ဆိုတဲ့ ဂျိုကာသာရှိခဲ့ရင် ပန်းတိုင်ကို တမဟုတ်ချင်း အရောက်သွားနိုင်တယ်လေ။
ကဲ အခုထပ်ပြောချင်တာက အချစ်နဲ့ ရှမ်းကိုးမြှီးနဲ့ ဆက်စပ်မှုပေါ့။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ပိုကာမှာ ပန်းတိုင်အတွက် ဂျိုကာဖဲဟာ ပထမနေရာမှာ မရှိသလိုပဲ။ ရှမ်းကိုးမြှီးမှာလဲ အချစ်ရဲ့သင်္ကေတ Heart ဆိုတဲ့ အသည်းပုံဟာလည်း ဖဲချပ်တွေထဲမှာ ဒုတိယ အဆင့်ပဲရှိထားတယ် မဟုတ်ပေဘူးလား။ ဖဲအကြောင်းမသိတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အားနာပေမယ့် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တော့ ရေးလိုက်တယ်ဗျာ။
လောဘမသတ် ၂ဆ ဥထား
အချစ်၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာထပ်တူ
*၂၀၀၉ ခုနှစ် Velantine Day အမှတ်တရ။*
8 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... ကဗျာ, ဟိုတွေးဒီတွေး
၉ ရာတောင် မရပါဘု
23 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... ကဗျာ
ဒီပွဲမှာ ဘက်လိုက်မှုတွေတော့ မရှိဘူး
မျက်ရည်တွေကော ရယ်သံတွေပါ ငါခလုတ်တိုက်ခဲ့ပြီလေ
တကယ်တော့ ငါကိုယ်တိုင်လည်း အညှီနံ့ မကင်းပါဘူး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ ဒီခြေလှမ်းကို ဆက်လှမ်းနေဦးမှာပဲ
အေပရယ် ဂျွန်နဲ့ နိုဝင်ဘာ
အလုပ်စားပွဲပေါ်က ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ပြီး ရွတ်မိလိုက်တာပါ။ ဇန်နဝါရီလည်း ကုန်သွားပြီ။ ညီလေး လင်းအရုဏ်ပြောသလို...........
“ကဲ… ဘာပဲပြောပြော ၂၀၀၉ ဇန္နဝါရီလကြီးရေ… ကျွန်တော်လင်းအရုဏ် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ နောင်ဘယ်တော့မှ ပြန်တွေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး…။ ဒီလအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်ကို အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ရစေခဲ့လို့၊ အင်တာနက်လှိုင်းတွေပေါ်မှာရော ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာပါ မိတ်ဆွေအသစ်တွေရစေခဲ့လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…။
ကဲ… ကျွန်တော်သွားတော့မယ်နော်။ ကျွန်တော်ကတော့ အသက်ရှင်နေသေးသ၍ ဆက်သွားနေရဦးမယ်ဗျ… နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ဇန္နဝါရီလကြီးရေ…။” လို့ပဲ နှုတ်ဆက်ရမလားပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီလတော့ ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ပြောမယ့်သာပြောတာ ဖေဖော်ဝါရီကို ကျနော်က သိပ်ကြိုက်တာဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့။................ ကဲ အစကတော့ ပြောမလို့ပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ မေးတော့မယ်။ အစ်ကိုတွေ၊ အစ်မတွေ၊ ညီတွေ၊ ညီမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ဖြေပေးကြဗျာ။ နောက်နေ့မှ အဖြေပေးတော့မယ်။ :)
19 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... အတိုအထွာ, မေးမြန်းခြင်း
မနေ့က အိမ်အပြန် လမ်းမှာ ကျားလေး နှစ်ကောင်တွေ့လို့ ဝင်နောက်ခဲ့တယ်ဗျာ။ မှတ်တမ်းလေး ပါတင်ခဲ့တယ်။ :) :) :)
14 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... မျှဝေခြင်း, ဟာသ
Burglish နဲ့ ဝိဇ္ဇာ Release 1.6
မကြာသေးခင်ကပဲ သူငယ်ချင်း ဒီဇင်ဘာစင်ဒရဲလားနဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ ကိစ္စလေးပါ။ ဒီနေရာ မှာပါ။ ဒီကိစ္စကို မပြောတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် ဒီနေ့ ဒီဟာလေးတွေ့လို့ တင်ပြလိုက်တာပါ။ အဲ... ဒါနဲ့ ဒီဟာလေးဆိုတာကိုမပြောခင် ပြောချင်တာလေးတွေကို အရင်ပြောပါမယ်။ (ကဲ သူငယ်ချင်းရေ့ စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ ဆရာစားတော့မယ်။) ဒါနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ရှေ့က ပို့စ်တစ်ခုမှာ Linguistics ဆိုတာကို နည်းနည်းလောက်တော့ မိတ်ဆက်ပြီးသားပါ။ မြန်မာလို ဘာသာဗေဒလို့ ခေါ်တဲ့ Linguistics ပညာရပ်ကို Ferdinand de Saussure က စပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီပညာရပ်ကို သာမာန်လူတွေကတော့ သိပ်မသိကြပါဘူး။ Language ကို အဓိကထားပြီး ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့ ကျနော် ဗီလိန်အတွက်ကတော့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
Language ဆိုတာ ဘာလဲ။
Wiki မှာတော့ Language ကို A language isadynamic set of sensory symbols of communication and the elements used to manipulate them.
လူသားအချင်းချင်း ကူးလူးဆက်ဆံ ပြောဆိုရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အရာကိုခေါ်တာပါ။ English လည်း Language တစ်ခု ဖြစ်သလို မြန်မာကလည်း Langauge တစ်ခုပါပဲ။ ဒါဆိုရင် Burglish ကကော သူလည်း Language တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေက ဒီကစပါတယ်။ ရောထွေးနေကြတဲ့ Chatting စကားဆိုတာကကော။ ဒါလည်း ခေတ်သစ် Language တစ်ခုလို့ပဲပြောရပါမယ်။ အဲဒီ့ အငြင်းပွားမှုတွေဟာ အခုပြောမယ့် Language တွေကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိလို့ဖြစ်ရတာပါ။
၅။ Chatting Language
၆။ Burglish + Chatting Language
ဘယ်လိုမကွဲပြားဘူးလဲ ဆိုတဲ့ နံပါတ် ၄၊ ၅၊ ၆ နဲ့ကို မကွဲကြတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Burglish က Chatting မှာပဲ သုံးကြတော့ Pure Burglish က ပျောက်သွားတာပါ။ Standard ရှိမှ လက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့ ကိုအင်ဒီတို့အတွက် Pure Burglish ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပြဿနာတစ်ခုက တဘက်လူက နံပါတ် ၆ ကို သုံးရင် တဝက်လောက်ပဲ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ နံပါတ် ၆ က ကော Standard မရှိဘူးလား။
ကိုအင်ဒီပြောတဲ့ Standard ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားရပါမယ်။ Communication လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကူးလူးဆက်ဆံဖို့ အတွက် Language ဆိုတာတွေ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ဟိုးကျောက်ခေတ်ကတည်းက Body Language က စပြီး ဝူးဝူးဝါးဝါးကနေ အခုခေတ် အဆင့်မြင့် ဘာသာစကားတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Body Language ဟာ ကမ္ဘာဦးခေတ်က စခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ အသုံးပြုနေရဆဲပါ။ ကိုယ်ပြောတာ သူပြောတာ ကိုယ်နားလည်ပေမယ့် ကိုယ့်ပြောတာ သူနားမလည်ရင်လည်း Communication မဖြစ်ပါဘူး။ ကျနော် ခြေချထားတဲ့ နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ သူတို့ပြောတဲ့ Singlish ကို ကိုယ်က နားလည်နေပြီဆိုပေမယ့် ကိုယ်ပြောတဲ့ Pure English ကို သူတို့က နားမလည်ပါဘူး။ ငါ အီးကောင်းတယ်၊ ငါအီးက အမှန်၊ ငါ့အီးအဆင့်အတန်းက ဒီလို ဆိုပြီး စွတ်ပြောနေလို့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သူငယ်တန်းကနေ စပြီး ၁၅ နှစ်။ နှစ် ၂၀ သင်ကြားပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ Pure English ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး Singlish ကို သုံးနေရပါတယ်။ Dead Line တွေ ကြားထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အချိန်မှာ အလုပ်ပြီးဖို့က အဓိကဖြစ်နေပါပြီ။ English စာပိုတော်လို့လဲ လခပိုမရနိုင်တဲ့ နေရာမို့လားတော့မသိပါ။ Hotel Reception လိုနေရာမျိုးမှာ လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့လေ။ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလား၊ ဖိလစ်ပင်း၊ မလေး၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်တရုတ် စတဲ့သူတွေ ကြားထဲမှာ Pure English နဲ့ သွားပြောရင် Sorry? What do you mean? Again please? What? စတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြူးကြောင်ကြောင်ပဲ ပြန်ကြည့်ခံရုံပါပဲ။ အဲ့ဒီမှာ Dead Line! Dead Line! ဆိုတဲ့ Alarm က Singlish ပြောဖို့ တိုက်တွန်းချက်နဲ့ Singlish ကိုပဲပြောရပါတယ်။ ဥပမာက တော်တော်ရှည်သွားပါပြီ။ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက ကိုအင်ဒီလိုချင်တဲ့ Standard ဆိုတာက Language တစ်ခုမှာ လိုချင်လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Communication မှာ ရှိတဲ့ Standard ဆိုတာက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်ဖို့ပါပဲ။ Chatting ဆိုတာကလည်း Communication အတွက်သုံးကြတဲ့အတွက် များပါတယ်။
ကဲပါလေ။ အပေါ်က နံပါတ် ၄၊ ၅၊ ၆ ကို ထပ်ပြီး အကျယ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်-
နံပါတ်-၄ ဖြစ်တဲ့ Burglish ဟာ။ Linguistic ကို အခြေခံတဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုပါ။
ဒီဘာသာဟာ မြန်မာမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ A to Z မသုံးတဲ့ ဘာသာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကွန်ပြူတာနဲ့ အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ အရမ်းကိုထိရောက်တဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ ဂျပန်မှာလည်း katakana (ခတခန)၊ တရုတ်မှာလည်း pbmf(ပေါဖောမောဖောဟ်) စတဲ့ စနစ်တွေဟာ Linguitist ကို အခြေခံပြီး အသုံးပြုထားတဲ့ Burglish နည်းတူ Language စနစ်တွေပါပဲ။ တကယ်တန်း Burglish က ဘယ်အချိန်က စပေါ်မှန်းမသိခဲ့ပေမယ့် ကျနော် စသိတာတော့ Chatting ထဲမှာပဲ စသုံးခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Pure Burglish ကိုမသိကြတော့ပဲ နံပါတ် ၆ ဖြစ်တဲ့ Burglish + Chatting Language ကိုပဲ Burglish လို့ လူသိကြပါတယ်။
နံပါတ်-၅ ကတော့ Chatting Language ပါ။
သူကတော့ Language တစ်ခုလို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ US တို့ UK တို့မှာပါသုံးကြတာပါ။ Type ရိုက်ရင် ချွေတာဖို့ သုံးကြတာပါ။ အရင်ခေတ်က ကြေးနန်းလိုပေါ့။
Thanks ကို thz
Just ကို Jux
you ကို u
too ကို 2
at ကို @
Why ကို y
Long time no see ကို ltns
စတဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ Typing ဖောင်းပွမှုကို ရှောင်ချင်လို့သုံးကြတာပါ။
Linguitist နဲ့ကွာတာက။ Linguitist ဟာ အသံထွက်သမျှကို ချရေးဖို့ အတွက် Standard ထားပြီး
Chatting Language ကတော့ အသံထွက်ဖို့အတွက် ကြုံရာစကားလုံးနဲ့ ချရေးတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ Standard က အသံပေါ်မှာရောက်နေလို့ Standard မရှိဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ ပြောချင်တာက Linguitist က အရေးကို အဓိကထားပြီး Chatting Language က အသံကိုအဓိကထားပါတယ်။
ဥပမာ... မြန်မာစာပေမှာလည်း “ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံ” လို့ ဆိုသလိုပါပဲ။ မြန်မာစာမှာ မုန့်သည် ကို မုန့်သယ် လို့အသံထွက်ပါတယ်။ Chatting Language က အသံကို အဓိကထားလိုက်တာဖြစ်လို့ မုန့်သည်ကို မုန့်သယ်လို့ပဲရေးပါတယ်။ မုံ့သယ်လို့ ရေးရင်တောင်မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Chatting Language သုံးတာဟာ စာလုံးပေါင်း မှန်ကန်ရေးအတွက် ထိခိုက်စေပါတယ်။ Chatting သုံးနေကြလူတွေက အပြင်မှာ အမှန်သုံးရမယ့် နေရာတွေမှာတောင် မှားကုန်ကြပါတယ်။
နံပါတ် ၆ ကတော့ Burglish + Chatting Language ပါ။ လူသိများတာကတော့ Burglish (Myanlish) လိုပဲ လူသိများပါတယ်။
သူက တော့ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် မတွင်ကျယ်သေးတဲ့ အချိန်မှာ Burglish သုံးပြီး Chatting သုံးတဲ့ အတွက် အပေါ်ကပြောသလို Typing တွေ လျှော့ချဖို့ Chatting Language ကို Burglish နဲ့တွဲပြီးသုံးတဲ့ Langauge ပါ။ ဒီတော့ အသံထွက်ပေါ်မှာ အဓိကထားတဲ့ အတွက်စာလုံးပေါင်း အမှန်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ လုပ် ဆိုတဲ့ စာလုံးကို loat, lote ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သတိထားသင့်တာက English မှာ ရှိတဲ့ Words တွေကို မသုံးမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ load လို့သုံးလဲရပေမယ့် load က English မှာ ဖြည့်စွက်သည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ ကျည်ထိုးသည်။ စတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတဲ့ အတွက် အသုံးမပြုမိစေဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။
နံပါတ် ၅ နဲ့ ၆ ကို Language လို့ မသတ်မှတ်ချင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် စာရေးရ အဆင်ပြေအောင် Language လို့ ရေးလိုက်တာပါ။
အဲ... ဒီပြဿနာတွေကို ဒီထက်ပိုပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဝိဇ္ဇာ release 1.6 ကို Download ဆွဲကြည့်ပါ။ ဒီယူနီကုဒ်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကတော့ အောက်မှာဖော်ပြပါတယ်။
Wait Zar - Version 1.6
Myanmar text in this document requires Myanmar3, PadaukOT, or Parabaik to be installed.
Thank you for downloading Wait Zar.
· The only file you need is WaitZar.exe
· The files mywords.txt and config.txt are optional. Put them in the same directory as WaitZar.exe if you unzip it.
· If you don't have Padauk.ttf installed, please install it.
Using Wait Zar
Double-click on WaitZar.exe. You should seeanew icon in your system tray.
It reads "ENG"
Hold "Ctrl" and hit "Shift", and the icon will change to Burmese.
You'll see "မြ"
Now, switch to Microsoft Word, change the font to Myanmar3, and type "ko". You will see several options.
Hit "space" to select the first one. You will see "ကို" appear in the "sentence" window. Hit "5", and you will see "၅" appear in the sentence window too:
Continue typing words if you want, then press "Enter". You will now see "ကို၅" appear in Word:
Wait Zar is covered under the Apache license, version 2.0. Please see the files LICENSE and NOTICE for more information.
That's all there is to Wait Zar for now, but if you're interested or need help, here's some more information:
Q: It's not working right!
A: Please report bugs on: http://code.google.com/p/Wait Zar/issues/list
Also, please note that this is still experimental, so some things (hibernating, etc.) may cause the system to glitch.
Q: It's messing up my computer
A: Right-click on the ENG or မွ icon (whichever is showing in your tray) and choose "Exit". This should fix any problems. If right-clicking doens't work, hit Ctrl+Alt+Delete and click on the "Processes" tag. Click on the process "Wait Zar.exe" and choose "End Process". If that doesn't work, Log Out and Log In to your computer (no need to shut it down). Wait Zar makes NO long-term changes to your computer, so killing the process and restarting Wait Zar should fix almost any problem.
Q: Why have the sentence window? Why not just type words directly?
A: If you don't like it, just disable the sentence window in config.txt. But, you should consider using it. For one thing, the sentence window allows Wait Zar to "predict" which word you will type. This means you won't have to hit left/right so often; the first choice is usually correct. Secondly, most Windows programs currently do not support Burmese words, so hitting left/right will move between "zero-width" characters and might be confusing or irritating. Hitting left/right in the sentence window will move correctly between words.
Q: How do I do (something advanced)?
A: Please refer to the user's guide distributed with Wait Zar for the complete documentation.
Q: I use Ctrl+Shift for something else!
A: The file config.text allows you to change the hotkey used to activate Myanmar in WaitZar.
A: Probably. Wait Zar is very much open-source. A lot of its discussion is in:
20 ...သူတို့အမြင်... စာအမျိုးအစား:... မှတ်သားဖွယ်, မျှဝေခြင်း
ဓမ္မသဘင် (ဆရာတော် အရှင် ဇဝန - မေတ္တာရှင်) ၂၈-၀၂-၀၉ န...